HIDDEN ARY ANTANANARIVO ARISOA Archives - Afrikhepri Fondation
Ilay Fanjakana Very an'i Faraona Mainty (Lahatsary)
Nandritra ny zato taona teo ho eo, tarana-mpanjaka farao mainty avy amin'ny fanjakan'i Kush (Sudan ankehitriny) no nitondra an'i Egypt. Io fanjakana io dia noheverin'ny Egyptianina ho faritany ...
Ny marina momba an'i Gaddafi (Lahatsary)
Safia Enjoylife dia vehivavy geyey izay liana amin'ny tantaran'i Afrika sy ireo am-pielezany. Nandritra ny fikarohana nataony sy ny dia nataony, dia nivoatra ny fahalianany tamin'io lohahevitra io ...
Fanjakan'ny Faraona Mainty - Documentary (2014)
Manodidina ny 800 talohan'i JK dia nahomby tamin'ny fandresena ny seza fiandrianan'i Egypt ny mponin'ny tanin'i Kush. Voafafa tamin'ny tantara nataon'ny egyptiana, ity fizarana ity dia tsy tamin'ny voalohany ...
The Last Skirmishers - Documentary (2019)
Nideraina nandritra ny fifanolanana eran-tany dia nampirongatra ny tsy fahatokisana ireo mpanao ady an-trano Senegaly nandritra ny ady kolonialy. Tsy misakana azy ireo hiady tsy mivadika ...
Ny dadaben'i Ramses II, Ramses I, dia mpiambina andian-tsoavaly izay avy amin'ny olon-tsotra afaka tamin'ny Delta (...), ary notarihin'i Horemheb handimby azy eo amin'ny seza fiandrianan'i Ejipta. Seti ...
Ny fahamarinana dia miaraka amin'ny Temperance, Wisdom and Courage, iray amin'ireo toetra tsara efatra an'ny Knight. Tokony ho tia ny fahamarinana isika ka hanome izany ho an'ny olona. Io toe-javatra io dia mahatonga antsika ho mendrika ny anaran'olombelona ....
Ity misy tantara iray izay tafiditra ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana frantsay ary mahakasika ilay maditra mainty izay mpikambana iray amin'ny fianakavian'ny mpanjaka ao ...
Ny fankalazana an'i Sigui eo amin'ny Dogon
Ny lanonana fahenina ambin'ny folo an'i Sigui dia maharitra fito taona. Mankalaza ny fisian'ny kabary am-bava amin'ny lehilahy izy ireo, ary koa ny fahafatesan'ny razana voalohany ...
Nahita an'i Amerika ny Afrikanina taloha kelin'i Christopher Columbus
Mazava fa tsy siansa ny tantara, afa-tsy ny lainga. Amin'ny alàlan'ny fandalinana ireo siansa maoderina maro, ny akademika iray dia mampiseho fa ny Amerika talohan'ny Columbian dia ampahany kontinanta afrikanina. Ity ny fomba Andrefana ...
Ny tantara miafina an'ny mainty hoditra - Xavier Séguin
Angano efa nifanarahana ny tantara raha ny nambarany ka ilaina ny mametraka fanontaniana satria eto amin'ity tontolon'ny lainga, fanodinkodinana ary fahamarinana miafina ity ...
Ela be talohan'i Christopher Columbus, efa nisy Afrikana tany Amerika